‘सम्पदा दर्शन’ का लेखकको बाल्यकाल – Ketaketi Online
‘सम्पदा दर्शन’ का लेखकको बाल्यकाल
अडियो / भिडियो मेरो बाल्यकाल साहित्य
April 7, 2022 April 24, 2022 Ketaketi OnlineLeaveaComment on ‘सम्पदा दर्शन’ का लेखकको बाल्यकाल
भाइबहिनीहरु, आज हामीले आदरणीय लेखक सुशीला देउजाको बाल्यकालको रमाइलो अनुभव लिएर आएका छौँ ।
नियात्रा लेखनमा स्थापित लेखक देउजाका १३ वटा कृति प्रकाशित छन् । उहाँको पछिल्लो कृति सम्पदा दर्शन (बालनियात्रा संग्रह) हो । यस कृति पढेर नेपालको गौरव सम्पदाबारे ज्ञान आर्जन गर्न सकिने र किताब पढ्दै नेपालका सम्पदा क्षेत्रहरु घुमेको झैँ रोचक आनन्द पनि लिन पाइने भएकाले सम्पदा दर्शन कृति सबै बालबालिकाले एकपटक पढ्नै पर्ने कृति हो ।
आज यही उत्कृष्ट कृति सम्पदा दर्शनका आदरणीय लेखक सुशीला देउजाको बाल्यकालको सम्झना लिएर आएका छौँ । उहाँ आफ्नो बाल्यकालको सम्झना सुनाउँदै भन्नुहुन्छ :
वुवा श्री तुङ्ग ध्वज खाण र मुमा श्री लक्ष्मी देवी खाणको कोखबाट सुदूर पश्चिमको डोटी शिलगढीमा मेरो जन्म भएको हो । जीवनको स्वर्णिमकाल भनेको नै बाल्यकाल हो । बुवाआमाको काखमा निश्चिन्त पीरताप दुःखबाट टाढा रमाइलो बेला हो त्यो । अहिले पनि त्यो रमाइलो क्षण सम्झँदा बाल्यकालमा बिताएका दिनहरु नै याद आउँछ ।
मेरो बाल्यकालको अधिकतम समय पश्चिम नेपालको पहाडी इलाकामा बित्यो । न्यायालयमा कार्यरत मेरो बुवाको विभिन्न जिल्लामा सरुवा हुने गथ्र्यो । त्यही क्रममा बुबाको बाग्लुङ्गबाट बैतडी सरुवा भयो रे । सानै थिएँ त्यतिबेला, राम्ररी याद पनि छैन । बैतडीमा हामीले लामो समय बितायाैँ । बाल्यकालका अविस्मरणीय रमाइला पलहरु धेरै जसो बैतडीका नि आउँछन् ।
बैतडी बजार डाँडामा अवस्थित छ । सबै भन्दा माथि जगन्नाथको मन्दिर छ । त्यसभन्दा तल टुँडीखेल अनि तेर्साे परेर बसेको बजार छ । त्यही बजारमा हामी बस्थ्यौँ । मेरो अक्षराम्भ पनि यही भएको हो । स्कुल अलि टाढा थियो । म दाइदिदीहरुको पछि लागेर जान्थेँ । बजारबाट जाने बिद्यार्थीहरुको लिडरजस्तै हुनुहुन्थ्यो मेरो दाइ । सबैजना एकै चोटी स्कुल पुग्थ्यौँ । जति हतार गर्दा पनि कहिले काहि ढीला भइहाल्थ्यो । स्कुल पुग्न अलिकता मात्र ढिला भयो भने मास्टरसाब बिद्यार्थीलाई सजाय दिन तम्सी हाल्थे । कहिले बिद्यार्थीको औंलाको तल सिसा कलम राखेर माथिबाट स्केलले हान्थे । नराम्रो सँग दुख्थ्यो होला, दाइहरु अइँया भन्दै रुन्थे । कहिले कुखुरा बनाउँथे । कहिले पिँडौलामा लौरोले स्वाट स्वाट हान्थे । म सानी भएकीले सजाए पाउदिनथँे । तर त्रसीत भई थुरथुर काम्दै हेर्थेँ ।
सजायको डरले बिस्तारै बिस्तारै बिद्यार्थीहरु स्कुलबाट टाढा हुन थालेका थिए । एउटा समूह नै भई हिँडेका बिद्यार्थीहरु नजिकैको जंगलमा खेलेर समय बिताउन थालेका थियौँ । त्यसको नेतृत्व मेरो दाइले गर्नुहुन्थ्यो । स्कुल छुटेको घन्टी लागेपछि सबै घरतिर जान्थ्यौँ । यसरी नै केही दिन बित्यो । कसैलाई थाहै भएन । एक कपडा पसले पण्डीतजीका परिवार हाम्रो छिमेकी थिए । उनकै पसल अगाडिबाट हामी स्कुल आउने जाने गथ्र्याैँ । उनी हामी केटाकेटी के गर्छाैँ, कहा जान्छाँै भनी चियो गर्दा रहेछन । मलाई दाइले स्कुल नगएकोे कुरा कसैलाई पनि नभन्नु नत्रसँगै स्कुल लान्नँ भनी चेतावनी दिनुभएको थियो । मलाई स्कुल जान असाध्यै रमाइलो लाग्ने भएकाले स्कुल जान नपाइएला कि भनी स्कुलबाट भागेको कुरा कसैलाई पनि भनिनँ । एकदिन दाइ बाठो भएर हाफ टाइममै स्कुल छुट्टी भयो भनी हामी निस्फिक्रीसँग घर पुग्याँ । ती पण्डितले मुमालाई पहिले नै हामी स्कुलबाट भाग्ने गरेको कुरा लगाइसकेका रहेछन् । मुमा पनि रिसले चुर भएर बस्नुभएको रहेछ । स्कुल समयभन्दा पहिले घर पुगेको देख्नासाथ मुमाले डोरी ल्याएर हामी तिनै जनालाई हात पछाडि लगेर बाँधी दिनुभयो । सिस्नो ल्याएर खुट्टामा झ्वाम झ्वाम हान्नुभयो । अइयाँ अइयाँ भन्दै हामी रुन थाल्याँै । खान पिउन केही नदिएर दिनभर चोकमा लडाएर राख्नुभयो । बेलुका अब पनि यस्तो गर्ने हो ? भनी सोध्नु भयो । अब नगर्ने भनी माफी मागेर घरभित्र पस्न पायौँ । दाइ र दिदीको पछि लागेर मैले पनि सजाय भोगेँ । बुवा आइपुग्नुभएपछि फेरि कुटाई खाइएला भनी त्यो दिन हामी तिनै जना खाना पनि छिट्टै सुतेका थियौँ ।
त्यस्तै अर्काे एउटा रोचक घटना पनि छ । नेपालमा छुवाछुतको कुप्रथाले चरम सिमा नाघेको बेला थियो त्यो समय । बैतडी मात्र कसरी अछुतो रहन सक्थ्यो र । हाम्रै छिमेकी ती पण्डितको घरको तल्लो लहरमा सुनारहरुको घर थियो । सुनारको हामी सरहका छोरीहरु थिए । हामी केटाकेटीलाई जातभात भन्ने केही मतलब नै थिएन । मुमालाई थाहै नदिई हामी दिदी बहिनी दौडेर त्यहाँ खेल्न पुग्थ्यौँ । उनीहरु हाम्रा पक्का साथी भइसकेका थिए । कपडाका पुतली बनाउन सिपालु उनीहरुले हामीलाई पुतली पनि दिन्थे । हामी रमाउदै सँगै खेल्थ्यौँ । उनीहरुले केही खान दिए भने खाइदिन्थ्याँै । पण्डितहरुको घर भन्दा उनीहरुको घर झन् सफा सुग्घर चिटिक्क परेको थियो । को चोखो ? को बिटुलो ? हाम्रो सोचाइभन्दा परको कुरा थियो त्यो । हामीलाई ती सबै कुरामा मतलब पनि लाग्दैनथ्यो । तर पण्डितजीलाई यो कुरा पटक्कै मन परेको रहेनछ । मुमालाई कुरा लगाइदिएछन् । एकदिन दिउसो घाममा उनीहरुसँग खेलेर आएका मात्र के थियौँ, ‘कहाँ गएर आइस् ? ’ भनि मुवाले मलाई एक थप्पड लगाउनुभयो । म त्यहीँ लडेँछु । त्यसबेला देखि मुमा हामीलाई हात हाल्न डराउनु हुन्थ्यो
हाम्रो बेलामा अहिलेको जस्तो खेल्नेकुरा पाइदैनथ्यो । बुन्ने कात्ने कुरामा हाम्रो मुमा अति सिपालु, हामी दमाई दाइको घरमा गएर टुक्राटुक्री कपडा ल्याएर मुमालाई दिन्थ्यौँ । मुमाले मेहनत गरेर कति राम्रो पुतली बनाई दिनुहुन्थ्यो । हामी दंग परेर खेल्थ्यौँ । त्यताको एउटा चलन यस्तो रहेछ । वर्ष दिनभरि सबै केटीहरुले खेल्ने गरेको पुतलीलाई माघे सङ्ग्रातीको दिन डोलीमा राखेर बाजा बजाउँदै खोलामा लगेर सेलाउनु पर्ने रहेछ । जन्ती गए जस्तै सबै लावा लस्कर लागेर खोलासम्म पुगेर रुँदै पुतली खोलामा सेलाउँथे । फर्किने बेला बच्चाहरुलाई बेहुलाबेहुली बनाएर डोलीमा राखेर बाजा बजाउँदै घरसम्म ल्याउने गर्थे । अनि सबैजना बसेर भोज खान्थे । हामीलाई पनि मुमाले त्यति मेहनत गरी बनाइदिएको पुतली खोलामा फयाकेर आउदा मन सारै दुखेको थियो । रुँदै फर्किएका थियाँै । मुमाले हामी सबैको लागि खानेकुरा तयार पारिदिनुभएको रहेछ । रमाइलो मानी हामी सबैले खायौँ । हामीलाई बनभोज खान अति रमाइलो लाग्थ्यो । हामी बसेको घरको बारी ठुलो थियो । त्यही बारीमा हामी घरबाट भाडाँकुडा, खाना पकाउने सामान लिएर गई आफैँ पकाएर खान्थ्यौँ । त्यसको लागि मुमाले सघाउनु हुन्थ्यो । खुब रमाइलो हुन्थ्यो । एकपल्टको पिकनिकमा त हामीले त्यही बारीमा सानो परालले छाएको घर पनि बनायौँ । आफुले बनाएको घरभित्र पस्दा पनि असाध्यै धेरै रमाइलो भयो । त्यो खुसीको अनुभव त शब्दमा व्यक्त गरेर साध्य पनि छैन ।
सानोमा एउटा होचो थेप्चो रुखमाथि कार्पेट बिछ्याएर पुतली खेल्थ्यौँ हामी । यस्तै रमाइला कुराहरु त कति छन् कति । सम्झँदै मन फुरफुर भएर नाच्न थाल्छ ।
सानोमा हिउँ परेको बेला हिउँका डल्लाले हानाहान गर्दै हिउँको मान्छे बनाउँदै रमाएर खेल्थ्याँै हामी । बैतडीको मिठो सुन्तला सिरक ओढेर खान्थ्यौँ । त्यहाको अर्काे चिनारी त्रिपुरासुन्दरी भगवतीको मन्दिर पनि हो । जहाँ बर्षमा एकचोटी ठुलो मेला लाग्छ । बजारभन्दा अलि टाढा हिँडेर जानुपथ्र्याे । बजारका सबैजना अध्याँरैमा पेट्रोलम्याक्स बालेर जन्ती गए जस्तै लस्कर लागेर जान्थे । भोलि मन्दिर जाने भनेपछि रमाएर होला हामी केटाकेटीलाई रातभर निन्द्रा नै लाग्दैनथ्यो । कहिले त्यहाँ पुगौँ र चुईचुई गर्ने प्लास्टिकको पुतली, कपालमा लगाउने विभिन्न रङ्गका रिबन, थरिथरिका पिपलामेट र अरु थुप्रै सामान किनौँ जस्तो हुन्थ्यो ।
बर्षदिनसम्म पोषिलो खाना खुवाएर मोटोघाटो बनाएर भगवतीलाई चढाउने भनेर राँगा पालिन्थ्यो । त्यसलाई यस मेलामा हजाराँै तीर्थालुका सामु लखेटी लखेटी भालाले रोपेर बडो निर्दयीताका साथ बली दिइन्थ्यो । यहाँको अर्को नराम्रो चलन देउकी प्रथा । कुनै भाकल पूरा भयो भने देवीको सेवाको लागि भनी बालिका चढाउने चलन । जसले आजीवन घरबार नजोडी विवाह नगरी भगवतीको सेवामा दिन बिताउनु पर्दथ्यो । केही गरी विवाह गरिन् भने श्रीमान्को तुरुन्त मृत्यु हुन्छ भन्ने लोकविश्वासले गर्दा कसैले विवाह गर्ने आँट गर्दैनथे । यसरी यो चलनले गर्दा एक निर्दाेष बालिकाको जीवन दुःखले भरिन्थ्यो । भगवतीले आफ्ना सन्तानलाई पक्कै पनि यस्तो दुख दिन चाहेकी होइनन् होला जस्तो मलाई लाग्छ । आज मानिसमा जागरण आए पनि अझै लुकीछीपी यो चलन चलिरहेकै छ रे भन्ने सुन्दा मलाई दुःख लाग्छ ।
बैतडीको कार्यकाल पूरा गरी बुवाको दार्चुला सरुवा भयो । त्यसबेला दार्चुला अति विकट ठाउँ थियो । वर्षा बेला झमझम पानी परिरहेको चिप्लो बाटो भिरैभिर हामी केटाकेटीलाई डोकोमा बोकाएर लगिएको थियो । गर्भवती मुमालाई हिँड्न गाह्रो भएको थियो । सबै मिलेर थरथर खुट्टा कमाउँदै अनेक गरेर मुमालाई ठुलो भिर पार गराएको दिनको सम्झना अझै पनि ताजै छ । अलिकता मात्र पनि सन्तुलन बिग्रिएको भए सिधै महाकाली नदीमा खसिन्थ्यो । सपना देखेजस्तो अहिलेपनि सम्झदा पनि जिउ सिरिङ हुन्छ । दार्चुलामा जाडोमा साह्रै जाडो हुन्थ्यो । यति अग्लाअग्ला डाँडाहरु छन् कि दुईतिन घन्टा पनि घाम लाग्दैनथ्यो । खोँच भएकाले गर्मीमा अति गर्मी हुन्थ्यो । महाकाली नदि वारि नेपाल र पारि भारत छ । दुवैतिर समथर जमिन एकदम कम मात्र छन् । दुवै तर्फको पहाडको टुप्पो हेर्दा टोपी नै खस्ला जस्तो हुन्थ्यो । चुलाको तिन चम्का जस्तै डाँडा भएकाले पनि दार्चुला नाम रहन गएको हो रे भन्ने किम्बदन्ती छ । नेपालतिरको परिवेश वातावरण आज सम्झदा ढुङ्गे युगजस्तै लाग्छ । न स्कुल, न स्वास्थ चौकी, न कुनै अरु सुविधा नै थियो । दुई चारवटा अफिसहरु बाहेक केही थिएन । उता भारततिर सब कुराको सुबिधा थियो । मैले पहिलो चोटि गाडी त्यहीँ देखेँ । सिनेमा पनि त्यहीँ हेरेकी थिएँ । भारत र नेपाल बिचको महाकाली नदीमा पक्की पुल थिएन । बर्षा याममा तुइँनबाट र हिउँदमा काठे साँघुबाट वारपार गर्नुपथ्र्याे । एक चोटी हाम्रै आँखाअगाडि एउटा मान्छे साँघुबाट झ्वाम्म नदीमा खस्यो । हात हल्लाएर बचाऊ बचाऊ भन्दै थियो । हेर्दाहेर्दै नदीको पानीको बेगले कता पु¥यायो कता । बर्षभरिमा यस्ता घटना कति हुन्थे रे । घाँस दाउरा गर्नेहरु भिरबाट लडेर त्यति नै धेरै मर्थे रे ।
आज त्यहाँ त्यो विकट ठाउँमा सबै सुविधा पुग्यो होला । तर मेरो स्मृतिमा त्यहीँ बेलाको नमिठो याद छाप बनी बसेको छ । त्यसपछिको मेरो बाल्यकाल काठमाण्डौमै बित्यो ।
दाजुभाइ दिदी बहिनी बिच मेरो बाल्यकाल पीरताप दुःखबाट टाढा निश्चिन्त र रमाइलोमा बित्यो । जागिरे बुवाको बिभिन्न जिल्लामा सरुवा हुन्थ्यो । बाल्यकाल बिभिन्न जिल्ला घुम्दै बित्यो । हाम्रो घरमा पढाईको मामलामा छोरा र छोरीमा भेदभाव थिएन । सबैलाई बराबरको अवसर मिलेको हो । भेदभाव भनेको छोराले घरको काम गर्दैनथे छोरीले मात्र गर्थे । बुवा र दाजुको एउटा अर्काे कडा नियम थियो । पढ्न जति सक्छौ पढ तर जागिर खान पाइदैन । छोरी अर्काको नासो विवाह गरी पठाइ दियो टन्टै खतम भन्ने सोचाइ थियो परिवारको ।
मिठो खानु, राम्रो लाउनु मात्रै पनि जीवनको सार हैन । जीवनमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी मेरो मनमा सानैदेखि चलिरहन्थ्यो । कथा, कविता लेख्ने रहर मलाई सानैदेखि थियो । आत्मविश्वासको कमी कसैलाई देखाउन पनि अप्ठयारो लाग्थ्यो । अनि लेख्दै च्यात्दै गर्थेँ । कसैले मलाई किन लेखिस् भनी रोकेको पनि हैन । मेरो आफ्नै मनको कमजोरी निर्बलता र अन्तरमुखी स्वभावले मलाई रोक्यो । अघि बढ्न सकिनँ । कसैसँग आफनो मनको अन्तरद्वन्द्व खुलस्त पार्न पनि सकिनँ र मेरो रहर त्यतिकै ओइलाएर बसेको थियो । आज आएर सोच्छु, त्यसबेला मैले मन दह्रो बनाई, आत्मविश्वास बढाउनु पथ्र्याे । आँट गरेर अघि बढनुपथ्र्याे । मेरो यही अप्ठेरो मान्ने बानीले त्यस बेला अपराध मानिने एउटा काम म बाट हुनगयो । पहिलो पाला पर सरेको मिन्स भएको कुरा मैले दिनभर लुकाएर बसेँ । केही दिन देखि सबैले मेरो मुख हेर्दै भन्ने गर्थे । अब यो चाँडै हुन्छे जस्तो छ । मलाई यी शब्दले भित्रै देखि सिरिङ्ग भई त्यसैत्यसै डर लागेर आउँथ्यो । बिहान बिछौनामा देखेँ । संसारै भास्सिए जस्तो पिरोलिएकी थिएँ । कसैले देख्नु र थाहा पाउनु अघि नै मर्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो । अब कसरी अरुलाई मुख देखाउनु ? क्वाँक्वाँ रुन मन लाग्यो । यी सारा मनका पीडा दिनभर लुकाएर बसेँ । खान पिउन केही गर्न मन लागेन । होस् बेहोसको हालत मन साह्रै कमजोर भइरहेथ्यो । कसैलाई केही नभने पनि साँझसम्मको मेरो आत्तिएको नर्भस व्यवहारले होला मेरो मुवालाई शंका लागेछ क्यारे, ‘भईस की क्याहो’ भनि सोध्नुभयो । दिनभर रोकी रहेको बाँध फुटेजस्तो डाँको छोडेर रोएा । धेरैबेर रोएपछि बल्ल मन हलुका भयो । अनि बाह्र दिन सम्म अँध्यारो कुनामा लुकाएर राखे ।
यस्तै बितेका बाल्यकालका तिता र मिठा सम्झनाहरु धेरै छन् । सम्झँदा आज पनि रमाइलो लाग्छ ।
लामो अन्तरालसम्म पनि मेरो मनको अन्तरकुन्तरमा लुकेर बसेको मेरो लेख्ने रहरको बिज अझै मरेको रहेनछ । जीवितै रहेछ । जुनसुकै कुराको पनि ठिक समय आउनु पर्छ भने जस्तै लामो समयपछि समय अनुकूल मिलेको हो कि हिम्मत गरेर मैले उत्तराद्र्धमा आएर लेख्न सुरु गरेँ । बाल्यकाल देखिको मेरो रहर आज पूरा हुँदैछ । मैले जीवनको लक्ष्य प्राप्त गरे जस्तो सन्तोष महसुस गरेकी छु । लेख्नु धेरै छ, समय कम छ जस्तो पनि लाग्छ । त्यसैले सकेसम्म लेख्ने प्रयासमा छु । र, यो प्रयास निरन्तर रहने छ ।
भ्याली भ्यु इङ्लिस स्कुलका विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार
राष्ट्रिय टाइफाइड खोप अभियान सुरु
राष्ट्रिय बालगीत प्रतियोगितामा प्रथम भएको बालगीत
September 16, 2021 February 28, 2022 Ketaketi Online
नवराज रिजालसँग विशेष कुराकानी
December 6, 2021 February 28, 2022 Ketaketi Online
के आमाको माया सन्तानको शारीरिक अवस्था अनुसार भिन्न हुनसक्छ ?
March 31, 2022 April 6, 2022 Ketaketi Online